Twitter Abalandeli ▷ 🥇
Yenza i-akhawunti ye-twitter
Thenga abalandeli! Kufanelekile ukwenza iakhawunti ye-twitter kuba yenye yezona ndawo zisetyenziswa kakhulu kwinethiwekhi yoluntu kwihlabathi liphela. Nge-twitter sinokwabelana ngeevidiyo, imifanekiso, amakhonkco, iifoto kunye nesicatshulwa esikhawulelwe kubalinganiswa abangama-280 abaphumeleleyo.
Fumana abalandeli kwi-twitter
Thenga abalandeli! Ngaphambi kokubona ukuba abalandeli njani kwi-twitter, siza kuthetha kancinci ngayo. Le ntanethi yenethiwekhi ibiphakathi kwezona ndawo zindwendwelwe kakhulu kwihlabathi jikelele ngokwe sixhobo se-alexa, esibonelela ngedatha yeshishini kunye nohlalutyo ...
NgoFebruwari 27, 2019
Thenga abalandeli! Baninzi abasebenzisi abasebenzisa iinethiwekhi zentlalo, nokuba kukunxibelelana nabantu obathandayo. Okanye ukwaziswa rhoqo ngeendaba kunye nezithuba ezahlukeneyo zomdla. Nangona kunjalo, ...
Fumana imali nge-Twitter Funda ngoku!
Thenga abalandeli! Intengiso yenethiwekhi iye yaziwa ngendlela yehlabathi, kwaye baninzi abathathi-nxaxheba kuyo. Yonke into ilele ekusekeni imarike kunye nezicwangciso zobulumko ezinakho ukwenza ingeniso yomsebenzisi. Ezinye iinethiwekhi ...
Ngubani ongandilandeliyo kwi-Twitter?
Thenga abalandeli! "Ndilandele kwaye ndiyakulandela" ngumkhwa odumileyo wokufumana abalandeli ngokungakhethi, njengoko ingesosiqhelo sendalo. Ngapha koko, zininzi iingcali kunye nabazobi abaye bayayeka ukuyenza kwaye bayayikhuthaza le ndlela ...
NgoFebruwari 1, 2019
Zithini izimvo ze-Twitter?
Thenga abalandeli! I-Twitter yiyona nethiwekhi ye-microblogging eyaziwayo ekhoyo namhlanje kwaye impumelelo yayo ingenxa yokuthumela imiyalezo emifutshane, eyaziwa ngokuba yi "Tweets". Ukongeza ekuvumeleni ukuhlangana kwemihla ngemihla kwabantu abavela kwihlabathi liphela. Kwi ...
Thenga abalandeli! Ukusetyenziswa kothungelwano lwentlalo kube yinto ethandwayo. Amagcisa, abezopolitiko, iimbaleki kunye neenkampani bafuna iprofayile kwezi nethiwekhi, ukulinganisa ukungaziwa kwabo ngokusekwe kwinani labalandeli abanabo ...